Ilowday Password-ka Muuqaalka. Lost Furaha Muuqaalka Soo kabashada ereyga Muuqaalka
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair Ha iloobin ama lumin sirta feylka PST ee sirta ah.
Ma iloobaa mise waa lumiyey erayga sirta ah? DataNumen Outlook Repair caawin kara!
Ilaalinta Password Muuqaalka:
Markaad abuureyso feylal shaqsiyeed (PST) cusub oo ku yaal Muuqaalka, waad ku qarin kartaa lambarka sirta ah ikhtiyaar ahaan:
Waxaa jira saddex goobood oo sir ah:
Qarsoodi la'aan Tan macnaheedu waa inaadan sir galin faylka.
Qarsoodi ah compressible. Tani waa dejinta aasaasiga ah.
Qarsoodi Sare (Wixii Muuqaalka 2003 iyo noocyo ka sareeya) ama loo yaqaan 'Encryption Best' (For Outlook 2002 iyo noocyo hoose). Dejintani waxay leedahay most amniga.
Haddii aad dooratid mid ka mid ah sirta la isku halleyn karo ama midda sare ee sirta ah (midka ugu fiican), oo aad lambarka sirta ah hoos dhigto, faylkaaga PST waxaa lagu ilaalin doonaa lambarka sirta ah.
Goor dambe markaad isku daydo inaad furto ama aad ku shubato faylka PST-ga Muuqaalka, waxaa lagaa doonayaa inaad ku qorto lambarka sirta ah:
Haddii aad ilowdo ama lumiso erayga sirta ah, ama aadan aqoon gabi ahaanba lambarka sirta ah, markaa ma geli kartid faylka PST, iyo sidoo kale dhammaan e-mayllada iyo waxyaabaha kale ee ku kaydsan, illaa aad isticmaasho alaabtayada mooyee. DataNumen Outlook Repair, oo u xallin kara dhibaatada sida neecawda oo kale, sida soo socota:
Xullo feylka 'Muuqaalka' Muuqaalka 'PST' ee sirta ah sida isha PST ee la hagaajinayo.
Dayactir faylka 'Windows XP' ee sirta ah. DataNumen Outlook Repair ayaa qaaadin doonta xogta galka asalka ah ee la duubay ee PST, ka dibna u guuri doona xogta la soo duubay faylka cusub ee PST ee go'an.
Kadib nidaamka dayactirka, waxaad isticmaali kartaa Muuqaalka si aad u furto faylka PST ee go'an wax soo saarka, lambar sir ah looma baahna mar dambe.
Muunad fayl lagu duubay oo PST ah oo lambarkiisa sirta ah la iloobay. Muuqaalka_enc.pst
Faylka waxaa soo ceshaday DataNumen Outlook Repair, oo aan u baahnayn lambar sir ah mar dambe: Muuqaalka_enc_fixed.pst